Alaabta guriga - Decoora | Qurxin
ka alaabta guriga Waxay matalaan qayb aad muhiim ugu ah nolol maalmeedkeena. The mobnowio Waxay ka kooban tahay walxo ujeeddadoodu tahay inay fududeeyaan adeegsiga iyo waxqabadyada aadanaha. Waxay joogaan ilaa waqtiga aan kacno ilaa aan seexanayno. Sidaa darteed, waxaa aad muhiim u ah in la ogaado dhammaan noocyada alaabta guriga ka jira, kuwa aan u baahan nahay, kuwa aan jecel nahay iyo sida aan ugu qaabeyn karno gudaha qurxinta gurigayaga ama xafiiskayaga. Halkan waxaan ku ogaan doonnaa kuwii ugu dambeeyay isbeddellada berrinkan.
Sida loo hagaajiyo fadhiga fadhiistay
Sariirtaadu miyay murugsan tahay? Waqti ka dib, dhammaan fadhiga fadhiga ayaa ku dhamaanaya inay quusaan, sababtoo ah noloshooda waxtarka leh…
Kuraasta cuntada: sida loo doorto iyo talooyin si ay ugu raaxaystaan
by Qurxin samee Bilaha 3 .
Kuraasta wax lagu cunteeyo waa shay caadi ka ah dhammaan wadamada. Loo yaqaan kuraasta cuntada ee USA ama cadeiras…
by Maria Jose Roldan samee Bilaha 6 .
Qolka fadhiga ee guri kasta, fadhiga fadhiga waa mid ka mid ah walxaha ugu muhiimsan marka ay timaado helitaanka a ...
by Maria vazquez samee Bilaha 6 .
Haddii aad gurigaaga ku leedahay carruur da'doodu tahay saddex, afar iyo shan jir, firfircoonida iyo qosolka ayaa dammaanad qaadaya. Laakiin…
Sida loo daryeelo oo loo nadiifiyo alaabta alwaaxa ah
Qoryaha ayaa door weyn ku leh guryaheena. Waa mid ka mid ah agabyada ugu caansan soo saarista ...
Furayaasha si loo habeeyo gudaha armaajooyinka la dhisay
Armaajooyinka la dhisay ayaa noo oggolaanaya inaan ka faa'iideysanno meesha bannaan. Is -dhexgalka maadaama ay ku dhex milmeen meel gaar ah, waxay suurtogal ka dhigaan ...
Soo hel sofasyada 'Ikea ​​3-kursi' ee qolkaaga fadhiga
by Maria vazquez samee Bilaha 12 .
Ma qalabeysaa qolka fadhiga? Ma u baahan tahay inaad beddesho fadhigaagii hore? Buug-yaraha Ikea waxaad ka heli doontaa saafiyada dhammaantood ...
Ikea waxay bilaabeysaa qalabka guryaha lagu ciyaaro iyadoo lala kaashanayo shirkadda ROG
IKEA waxay soo saareysaa safkeeda koowaad ee qalabka 'ciyaaraha' iyadoo la kaashaneysa sumadda caanka ah ee Gamers. Uruurinta…
by Susy fontenla samee Sannadka 1 .
Jasiiraduhu waa asalka jikada furan. Waxay gacan ka geystaan ​​naqshadeynta guud ee booska, sida caqabad ...
Kaydinta ayaa ah qayb aad muhiim ugu ah guryaha. Haddii aynaan haysan alaab guri oo wanaagsan oo aan ku kaydinno iyo ...
Looxyada OSB: astaamaha iyo isticmaalka
Miisaska Ikea ee qurxinta gurigaaga
Kallax shelf ka Ikea, oo ah qalab aad u fara badan oo noocyo badan leh
Ku qurxin warqadda wax lagu dhejiyo ee qalabka guriga ku yaal
Xoghaye casri ah oo qurxiya goobtaada shaqada
Faa'iidooyinka alaabta guryaha ku shaqeeya ee badan
Sariiraha isku laaban Ikea waxay keydiyaan meel
Ku qurxi guriga dharka asaasiga ah ee qadiimiga ah
Alaabta guriga laga soo galo si loo qurxiyo hoolka
Kabadhka cagaha sariirta
Miisaska laalaabka ayaa kaa caawinaya inaad keydiso booska
Shelf shelf leh santuuqa, fikradaha lagu qurxiyo guriga
Isku laabashada ama isku laabashada sariiraha si loo badbaadiyo boos
Ikea shelf si loo qurxiyo loona abaabulo gurigaaga